DHEGEYSO-Faahfaahin ka soo baxaysa dagaalkii kadhacay deegaanka Dudun. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Faahfaahin ka soo baxaysa dagaalkii kadhacay deegaanka Dudun.
Diseembar 29, 2016 9:15 g 0
Gal-dogob, Dec 30 2016-Mas’uuliyiin katirsan dowladda Puntland ayaa shalay gaarey deegaanka Dudun oo hoosyimaada degmada Gal-dogob, halkaas oo uu dhowaan kadhacay dagaal u dhexeeya ciidanka dowladda Puntland iyo kuwa maamulka DDSI.
Gudoomiye ku-xiegeenka degmada Gal-dogob Mudane Cabdirisaaq Axmed Toox-yare, ayaa sheegay in dagaalkaasi uu bilowday kadib markii ciidanka DDSI ay dejiyeen calankii Soomaaliyeed, islamarkaana ay sureem calanka Itoobiya, taasi oo keentay in ciidanka Puntland ku baxaan.
http://daljir.com/Gal-dogob, Dec 30 2016-Mas’uuliyiin katirsan dowladda Puntland ayaa shalay gaarey deegaanka Dudun oo hoosyimaada degmada Gal-dogob, halkaas oo uu dhowaan kadhacay dagaal u dhexeeya ciidanka dowladda P
DHEGEYSO-Maamulka gobolka Nugaal oo reer guuraaga baaq u diray.
DHEGEYSO-Barnaamijkii Saaka iyo Dunida iyo Khadar Cawl.